> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka PC in hawada iPad
Hel la rumaysan dhuuban iyo Nuur iPad Air? Taasi waa weyn! Tani waxay lamid ah iPad Air kuu ogolaanayaa inaad u qaadato waqti kasta iyo meel kasta. Sidaas darteed, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si ay u gudbiyaan badan oo files ka computer si aad hawada iPad. , Sawirka ka mid ah files waa side waqti la soo dhaafay. Mahadiyay sawirada dib u daqiiqado macaan sida fasaxyada, xisbiyada, reeraha iyo in ka badan kuu keenaa. Sidaas darteed, waxaad u badan tahay ma waxaa gadaashiisa kaga tegi doonaa.
Si sawiro ka computer wareejiyo hawada iPad, Lugood dhici karta in aad ka filanayaa, in aragtida sawiro ay ka saareen hor syncing. Waxa ay noqon doontaa musiibo dhacdo sawiro ku saabsan hawada iPad markii yihiin asalka ah. Dhab ahaantii, inay sameeyaan kala iibsiga sawirka, inaad si fiican u noqon lahaa xirfad qalab xisbiga saddexaad caawimaad. The TunesGo Wondershare ama TunesGo Wondeshare (Mac) waxaa loo arkaa in xoog badan iPad qalab kala iibsiga ah. Sidaa daraadeed, aad awoodaan si ay u gudbiyaan aad sawiro jecel kombiyuutarka si aad hawada iPad la xafidaada kuwa hadda hawada iPad.
Waxa ugu horeeya ee aad samaynaysaa waa inaad kala soo baxdo qalab awood iibsiga suuf (versions Windows ama Mac) on your computer. Ku rakib oo abuurtaan sida. Tan iyo markii labada versions shaqeeyaan si la mid ah, waxaan go'aansan in ay qaataan version Windows sida tusaale si ay u muujiyaan sida loo nuqul sawirada kombiyuutar si ay hawada iPad.
Tallaabada 1. Isku aad hawada iPad in kombuutarka
Ka qaada cable USB iyo xiriiriyaan hawada iPad in kombiyuutarka. Your hawada iPad la isla ogaado doonaa ka dibna ku cad suuqa kala hoose. Laga soo bilaabo galeeysid bidix, waxaad ka arki kartaa warbaahinta, sawiro, xiriirada, fariimaha iyo playlists badbaadiyey ee u dhigma qaybaha.
Fiiro gaar ah: The version Mac uusan waxba ka maareeyo xiriirrada iyo fariimaha in muddo ah.
Tallaabada 2. Nuqul sawiro ka PC in hawada iPad
Tag galeeysid ka tegey oo guji Photos . On guddi saxda ah, waxaad ka arki kartaa Library Photo iyo Camera Roll. Haddii aad go'aansato in lagu badbaadiyo sawirrada laga keeno ee album cusub, waxaad riixi kartaa dar si ay u abuuraan mid. Markaas magacaabo album cusub oo la furo. In uu furmo suuqa cusub album, guji saddexagalka yar hoos Add . Dooro dar Folder ama dar File . Markaas, suuqa kala file browser soo baxa. Browse computer ilaa aad u hesho folder sawir doonayo ama sawiro. Markaas, guji Open in tanuna ha iPad qalab kala iibsiga si ay kuu caawiyaan photos dejinta kombiyuutar si ay hawada iPad.